Ngokwesiko, ulwazi siqondwa njengoba inqubo nokuxhumana ngale ndaba into, esiza ukuhlonza okuqukethwe ngokoqobo - okungukuthi, iqiniso lokuthi mhlawumbe futhi kuyoba. Uphawu isiko le nqubo angabhekwa ohlola imihlola Tiresias sibalo we "Odyssey". Ekuhloleni lolu hlobo umsebenzi womuntu kukhona omunye antinomy main: ukuhlanganisa phakathi cognition sezinzwa futhi okunengqondo. Akukho lapho lokhu inkinga esashiwo Nietzsche: wamelana izenzakalo ezifana edabukisayo kanye yokucabanga, Apollonian futhi Dionysian. Kubonakala le ngxabano Lva Shestova wabonakala ngokucacile umehluko phakathi "I-Athene" futhi "eJerusalema." Lonke umlando wefilosofi is ebuswa ukuphikiswa phakathi lenhlangotsimbili futhi enembile, futhi uzama ukuhlanganisa ibe okuthile wonke.
nefilosofi ulimi ezimweni eziningi multilayer, ngakhoke "umqondo" imibono kanye nolwazi "okunengqondo" ungakwazi ukuhlukanisa nezincazelo eziningana. Ngaphansi isilinganiso libhekisela ukucabanga okunengqondo, ehambisana ne-izinhlobo ezithile, ukwakhiwa predetermined (imiqondo, ukwahlulelwa, izincazelo, axioms). Lokhu Hlobo luni lokucabanga olukhuthazwa esithile ngokuvamile kohlaziyo, lisebenzisa exhasa futhi izindlela deductive. Njengomthetho, buka okunengqondo ekuqondeni izwe izibophezele ukuze zemvelo nezenhlalo, akhetha indlela ukuqonda lwetibalo lenhlangotsimbili, impumelelo wakhe oyinhloko iqoqo amasu kanye namafomu, okuyinto kukhona izimiso zomthwalo ucwaningo lwesayensi. Nokho, ifilosofi yesimanje, ezifana Feyerabend sithi kukhona izinhlobo eziningana rationality.
Umbono Ukudideka nomumo, ezifana umuzwa kanye nombono ukusebenza, advantageously ngokuhlanganiswa mkhuba maldistribution. Omunye izingxenye zalo kuyinto engenangqondo, nakho sehlukaniswe ukusabela okungokwemvelo emhlabeni (kungase futhi kwenziwe isihloko ucwaningo) kanti ezinye amnyama, lutho, ingqondo amaza njengosongo abese ephikisa. Okulandelayo aquleke (subliminal) emele sphere ethile, asho into ehlukile ingakuzwa kuvisisa. Wakhe wokuqala divined ukuba khona Leibniz, ngubani walibiza ngokuthi "Imibono amnyama." Khona-ke ukuze lokhu mkhuba saphenduka le Romantics isiJalimane, ukuqagela kuba umthombo engokwemvelo lokusungula. Ngokusho Freud, ke unamandla, umelana ukwazi amandla lapho ungazama ukulawula ngosizo psychoanalysis.
Sensual futhi okunengqondo ulwazi, ukuhlaziywa nokuqonda ezihlobene ukuphenywa kokuphulwa ezifana imiqondo ezithakazelisayo njengoba enembile. Kunezinhlobo eziningi umuzwa, okuyinto ungaya e-ukucabanga okunengqondo, noma akangeni naye. Kukhona heuristics okunengqondo - it is a hlobo luni lolwazi, lapho iqiniso phendla isihloko hhayi kancane kancane kodwa konke kusenjalo, ngokusheshayo. A indlela yokwazi, okwenzeka kungathi evele ngokuthi umuzwa nabanengqondo, futhi ukuqonda isayensi (ukuqonda) - liyisici yenchubomgomo okunengqondo ekutadisheni inkinga. Empeleni, kuba enye indlela ulwazi okunengqondo. Ngu umuzwa, ukuqonda kanye imodeli bokubeka ekuqondeni izwe, ngaphandle zesayensi, futhi indlela yokuba abantu, ngisho okuthile hlobo of amagugu (kusukela iphuzu Ngenxa Husserl futhi Scheler, bona ezikhonjwe hhayi ngokusebenzisa ingqondo, futhi izenzo uthando noma inzondo, isibonelo, isici esiyingqayizivele).
Kuye kwesikhathi, esikhundleni isinyathelo, isazi sefilosofi esithile, imibono samanje ahlukahlukene ulunge kangakanani indlela correlate cognition sezinzwa futhi okunengqondo. Nokho, ngokuvamile, zingase zihlukaniswe amaqembu amathathu - 1) umqondo, eyayisikisela ukuthi kulezi zinhlobo ezimbili umsebenzi engqondo negate ngokuphelele nomunye; 2) theory, hhayi kuphela bamelana, kodwa futhi delimiting Ububanzi yabo, 3) yokufundisa, uzama ukuthola umthombo owodwa kokubili izinhlobo ulwazi, kanye okukhethwa kukho ekusebenzelaneni kwabo nokuhlanganiswa. Lesi sigaba futhi isici ifilosofi isiko, lapho sibona indlela ukuphikiswa kokubili ezishaya unkulunkulukazi u-ukuphila nomoya, isipiliyoni kanye nekucabangisisa, kanye Eidos logo, ukucatshangelwa nomqondo inhliziyo kanye ekhanda, futhi imizamo ukunciphisa ukuba zifana.
Zhil Delez: Biography kanye nomsebenzi. "I logic of umqondo": isifinyezo
"Kuvele imfihlo evulekile" - kusho ukuthini
IsiDanishi sefilosofi Kerkegor seren: A Biography, izithombe
Izwe okungokomoya yomuntu: umqondo futhi izingxenye
Nendlela okufanele siphile ngayo? Sisiza yomuntu ehlukile
Isitifiketi siphelelwe yisikhathi, yini okufanele uyenze? Ukwaziswa Okumayelana izitifiketi zokuphepha
Tsiniya. Growing imibala amazing kuletha injabulo
Original imibono ngifaka ngoMashi 8 ngezandla zakhe
Ewan McGregor: Filmography, Biography of the umlingisi
Ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe ebusweni - indlela ukubhekana nazo?
Horoscope. Ukuhambelana: Leo nenhlanzi.
Kungani indoda yindoda? Kungani abantu izihambi?
Le filimu "Yokubusa Fire": nabalingisi izindima